🥇 ▷ Oppo F11 Pro waxay heshaa nooc cusub oo ah Waterfall Grey gudaha Hindiya ✅
Oppo F11 Pro waxay heshaa nooc cusub oo ah Waterfall Grey gudaha Hindiya
Bilo kadib bilaabida taleefanka casriga ah ee Oppo F11 Pro ee suuqa Hindiya, shirkadda Shiinaha waxay soo bandhigtay ikhtiyaar midab cusub – Waterfall Gray. Telefoonka ayaa horeyba looga heli karaa laba midabbo kale – Aurora Green iyo Thunder Black.
Oppo F11 Pro Waterfall Grey ee suuqyada Hindiya wuxuu ku kacayaa £ 23,990 wuxuuna ku yimaadaa hal qaab oo keliya – 6 GB oo RAM ah iyo 128 GB oo ah xusuusta gudaha. Telefoonku wuxuu bilaabmayaa qayb ka mid ah iibka maalinlaha ah ee ‘Prime Prime Amazon’ ee Hindiya.
Telefonka casriga ah waxaa lagu qalabeeyay 6.5 inji buuxa HD + muuqaal muuqaal ah oo leh shaashad ah 2340 x 1080 pixels, cabir dhan 19: 9 iyo shaashad ilaa cabirkii jirka oo ahaa 90.9%. Telefoonku malaha wax nasasho ah oo wuxuu ku imanayaa kamarad kor u qaadda, kaas oo guryuhu ku yaal dareemaha kaameeraha hore.
Xarka hoostiisa, aaladda waxaa ku shaqeeya ‘MediaTek’ chipset-ka caan ah ee dhex-dhexaadka ah – Helio P70. Sideed-processor-ka waxaa la soo saaray iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad 12-nm ah. Telefoonku wuxuu kaloo leeyahay aaladda teknoolojiyadda Hyper Boost, taas oo aasaasi u ah wanaajinta waxqabadka taleefanka.
Dhanka qolka kamaradda, taleefanka gacantu wuxuu leeyahay qalab laba kamarad gadaal ah, oo ka kooban 48 megapixel sensor koowaad iyo 5-megapixel sensor sare oo ay weheliso Flash flash, f / 1.79 aperture iyo leP 6 lens. Waxay la timid hab habaysan oo habeenkii ah oo loogu talagalay sawir ka fiican iftiinka hooseeya iyo astaamaha kale ee AI-ku saleysan.
Telefishanka ASUS ROG 2 wuxuu noqon doonaa telefoonkii ugu horreeyay ciyaarta ee lagu xoojiyo kartida loo yaqaan ‘Qualcomm Snapdragon 855 Plus chipset’ Xulashada Tifaftiraha: Telefishanka ASUS ROG 2 wuxuu noqon doonaa telefoonkii ugu horreeyay ee Qualcomm Snapdragon 855 Plus
Dhinaca hore, taleefanka casriga ah wuxuu la imanayaa nal 16-megapixel leh qalab kor u qaada, kaasoo ay shirkaddu doorbideyso inay ugu yeerto “Camera Rising”. Waxay taageertaa astaamaha AI-ku saleysan iyo sidoo kale shaqada furida wajiga. Dhinaca dambe ee taleefanka waxaa dareemaha faraha laga qaadaa.
Fursadaha isku xirnaanta waxaa ka mid ah dual 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS / GLONASS, iyo deked USB Micro. Dhanka software-ka, taleefanka casriga ah wuxuu ku shaqeeyaa Android 9 Pie oo ku saleysan ColorOS 6. Telefoonka casriga ah waxaa ku shaqeeya batteriga 4000 mAh, kaas oo la yimid tikniyoolajiyadda VOOC 3.0 Flash Charge teleefon degdeg ah.
Samsung Galaxy M40 Cocktail Ikhtiyaarka midabka liinta ah ayaa hadda laga heli karaa gudaha Hindiya ₹ 19,990 Xiga: Samsung Galaxy M40 Ock Cocktail ayaa hada laga heli karaa gudaha Hindiya lacag dhan £ 19,990